DAAWO VIDEO DEG DEG Turkey Dagaalkii Ugu Cusla Ku Ekeeyey Siiriya NATO Tageertay Ruushka Hanjabey – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeEnglish NewsDAAWO VIDEO DEG DEG Turkey Dagaalkii Ugu Cusla Ku Ekeeyey Siiriya NATO Tageertay Ruushka Hanjabey
February 20, 2020 marqaan English News, Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, uncategorized 0
Daawo Video Hoose
Wasiirka arrimaha dibedda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in ciidamada dowladda Siiriya, oo hawlgal ka fulinaya magaalada Idlib ay taageerayaan heshiisyadii hore uga jiray gobolka laakiin sidoo kale ay ka jawaabayaan caro. Weerarada milatari ee lagu qaadayo ciidamada Siiriya iyo Ruushka ee Idlib ayaa sii socday, ayuu yidhi.
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa yidhi: “Nasiibdarro waan ku guul darreystay inaan gaarno natiijadii la rabay. “In kasta oo wadahadalladu sii socon doonaan, waa run in aan aad uga fog nahay inaan ka soo baxno shuruudaha miiska.”
Arbacadii, hogaamiyaha Turkiga wuxuu ku hanjabay inuu bilaabayo hawlgal militari gobolka ka hor dhamaadka bisha Febraayo si uu u xoojiyo dib u gurasho haddii dowladda Siiriya ay ku guuldaraysato inay kala baxdo ciidamadii ay gadaal ka riixeen xilalkii militari ee Turkiga.
Turkiga, oo ka baqay duulaan ballaaran oo ah 1 illaa 2 milyan oo qaxooti ah oo ka yimid Idlib, ayaa ku guuleystey muuqaallo taageero ah oo ka imanaya Mareykanka laakiin Russia iyada oo maamusha hawada cirka Siiriya ee gobolka, ma cadda inta ay leegtahay Washington ama NATO.